Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण सेरमले तत्काल खोप नदिने
६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०७:०१
काठमाडौँ, ६ जेठ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’ उत्पादन गरेको भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले सन् २०२१ भरि देशबाहिर खोप दिन नसक्ने जनाएको छ । त्यसले गर्दा नेपालको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । कोभिसिल्डको पहिलो डोज लिएका ६५ वर्षमाथिको उमेर समूहका नागरिकका लागि दोस्रो डोज कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
नेपालमा कोभिसिल्डको पहिलो डोज खोप लगाएकाले १२ साताभित्र दोस्रो डोज लिनुपर्छ । सेरमले दिएको जानकारीले नेपाललाई जेठभित्रै प्राप्त भइसक्नुपर्ने १० लाख डोज खोप आउने स्थिति नदेखिएको कोभिड–१९ विरुद्धका खोप संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए । एक महिनाअघि नै नेपाल आइ सक्नुपर्ने खोप भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर देखिएपछि निर्यातका लागि प्रतिबन्ध लगाएसँगै रोकिएको थियो । नेपालले यो खोपका लागि अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको छ । कोभ्याक्सले मेभित्रै दिने भनेको खोप पनि कम्पनीको जानकारीले अन्योलमा परेको डा. उप्रेतीको भनाइ छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।